बाबुरामजीले ‘चिटिङ’ गर्नुभयो (प्रचण्डसँग विशेष अन्तर्वार्ता) - Ratopati
बाबुरामजीले ‘चिटिङ’ गर्नुभयो (प्रचण्डसँग विशेष अन्तर्वार्ता)
विभिन्न घटकका १० माओवादी पार्टी/समूह/व्यक्तिबीचको एकतापछि नेकपा माआवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड उत्साहित देखिन्छन् र उनको आत्मविश्वास बढेको छ । राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा देशकै पहिलो पार्टी रहेको दाबी गर्ने उनले संगठनमा पनि माओवादी केन्द्रलाई एक नम्बर बनाउने ‘मिसन’ चलाएका छन् । यसका लागि देशदौडाहमा छन् । भद्र सहमति र राष्ट्रिय सरकारको बहस पनि उनकै वरिपरि घुमिरहेको छ । आफूसँग डिभोर्स गरेर हिँडेका बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति नेपाल नामक पार्टीको औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् । मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’चाहिँ प्रचण्डको कार्यदिशा र कार्यशैलीमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीति र माओवादी आन्दोलनलाई आफ्नो केन्द्रमा राख्न सफल प्रचण्ड के सोच्दै छन् ? बुधवार बिहान आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा उनले डिस्कभरी न्युज नेटवर्क डीएनएनसँग लामो कुराकानी गरे । डीएनएनद्वारा सञ्चालित रातोपाटी अनलाइनका लागि प्रधानसम्पादक ओम शर्मा, नेत्र पन्थी र राजेश भण्डारीले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरेको कुराकानीको अंश ।
ओह्रालोमा गुडेको तर ब्रेक फेल भएजस्तै हिँडेको गाडीसँग माओवादीको तुलना हुन्थ्यो । जेठ ६ गते १० माओवादी घटकबीच एकता भयो । अब तपाईंंमा केही आशा, अपेक्षा र विश्वास बढेको छ ?
दस माओवादी घटकको एकता खालि केही समूह र व्यक्ति जोड्नेसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । दार्शनिक भाषामा भन्ने हो भने ‘माओवादी आन्दोलनको निषेधको निषेध हो’ भन्ने मेरो भनाइ छ । एकीकृत माओवादीलाई विभाजनने निषेध गर्यो विभाजनलाई फेरि एकताले निषेध गरेर माओवादी केन्द्र बनेको हो ।
दोस्रो कुरा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न एउटा नयाँ विचार संश्लेषणतिर लैजाने कुरामात्रै होइन, मेरो बुझाइ के छ भने, यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनकै चुनौती सामना गर्ने एउटा नयाँ पहल हो । जनयुद्धमा हुँदा हाम्रो साझा संकल्प थियो कि, २१औं शताब्दीका लागि हामीलाई एउटा नयाँ कम्युनिस्ट घोषणापत्र चाहिएको छ । अहिले विश्व भूमण्डलीकरण, विज्ञान प्रविधिको विकास, मौसम परिवर्तनको प्रभावसँगै सूचना प्रविधिमा जसरी तीव्र विकास भइरहेको छ, ती सबैलाई एउटा नयाँ संश्लेषण गरेर घोषणा गर्नु जरुरी छ । जसले नेपाली क्रान्तिलाई मात्रै नयाँ उचाइमा उठाउने होइन बरु विश्वक्रान्तिलाई पनि योगदान दिनुपर्ने चुनौती नेपालका कम्युनिस्टको काँधमा छ भनेर हामीले निष्कर्ष निकालेका थियौं । त्यतिबेला ‘२१औं शताब्दीमा जनवादको विकास’ सम्बन्धी प्रस्ताव मैले पेस गर्दैगर्दा किरण, बाबुरामलगायत सिंगो केन्द्रीय समितिले ‘ऐतिहासिक निष्कर्ष’ भन्दै त्यतैपट्टि केन्द्रित हुनुपर्छ भनेको थियो ।
अहिले यो १० माओवादी घटकको एकतामा किरणजी (मोहन वैद्य) पनि आऊन् भन्ने हाम्रो कोसिस थियो र बाबुरामजी फुत्केर नजाऊन् भन्नेतिर पनि हाम्रो कोसिस थियो । कसैले गहिरोसँग माओवादी आन्दोलनको अध्ययन गर्दै छ भने उसले थाहा पाउँछ । गत वर्षमा एउटा २५ बुँदे प्रस्ताव पेस भएको थियो र त्यो प्रस्ताव नेपालमा एउटा नयाँ वैचारिक संश्लेषण गर्ने र विश्वक्रान्तिलाई योगदान गर्ने महान् उद्देश्यमा आधारित थियो ।’ त्यसका निम्ति सबै केन्द्रित हुनुपर्छ भनिएको थियो । त्यसैले जेठ ६ गतेको पार्टी एकता सामान्य माओवादी समूह मिले भन्नेसँग सम्बन्धित छैन, यो एउटा इतिहासको, वर्गसंघर्ष र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्वव्यापी आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर सुरु गरिएको पहल हो । नयाँ ‘इनिसियटिभ’ हो ।
माओवादी विभाजन हुँदा मानिसमा निराशा र पलायनका भाव देखिए । तर, अहिले एकताको जुन पहल सुरु भएको छ, जनतामा नयाँ विश्वास र आशाको रक्तसञ्चार भएको छ । ती सबै मुद्दाअनुसार देशलाई हामीले हेटौंडा महाधिवेशनमा गएर एउटा संश्लेषण गरेर भन्यौं– अब उत्पादनका निमित्त संघर्ष हो ।’
यो सैद्धान्तिक कुरा तपाईंको स्कुलिङ पाएका कार्यकर्ताले बुझ्लान्, आजको दिनमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र मधेसवादीभन्दा माओवादीचाहिँ फरक के हो ?
मानिसले एउटा कुरा सजिलै बुझ्न सक्छन्, त्यो के भने अहिले नेपालको सम्पूर्ण राजनीति माओवादी आन्दोलनवरिपरि छ । यो कुरा होइन भनेर कसैले भन्न सक्ने ठाउँ छैन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मौलिक अधिकारका कुरा सबै माओवादीका एजेन्डा हुन् । भ्रम पारिएको छ, विभिन्न ढंगले भ्रम परेको पनि छ, म मान्छु ।
माओवादी विभाजन हुँदा मानिसमा निराशा र पलायनका भाव देखिए । तर, अहिले एकताको जुन पहल सुरु भएको छ, जनतामा नयाँ विश्वास र आशाको रक्तसञ्चार भएको छ । ती सबै मुद्दाअनुसार देशलाई हामीले हेटौंडा महाधिवेशनमा गएर एउटा संश्लेषण गरेर भन्यौं– अब उत्पादनका निमित्त संघर्ष हो ।’ त्यसोगरेर मात्रै समाजवादको आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने हेटौंडा महाधिवेशनको निष्कर्ष थियो ।
जनताको जीवनमा देखिनेगरी समृद्धिको रणनीतिभित्र जाने निर्णय हेटौंडाबाटै गरेको हुनाले मलाई लाग्छ– अहिलेको एकताले त्यो दिशामा जानका लागि र समाजवादको तयारी गर्ने सामन्तवादका अवशेष अन्त्य गर्नका लागि भूमिका खेल्छ । यो नै जनताका निम्ति प्रत्यक्ष र तत्कालै देखिने कुरा हो । जसको असर मेरो विचारमा आउने निर्वाचनमा देखिन्छ । चाहे त्यो स्थानीय निर्वाचन होस्, प्रादेशिक या केन्द्रीय ।
माओवादी संगठनमा तलदेखि माथिसम्म भद्रगोल छ, समस्यामात्रै देखिएका छन् । योखालको संगठन जसरी बनाउनुभयो, यसका बाध्यता आफ्ना ठाउँमा होलान्, अब यसले सुधारका लागि काम गर्छ कि, क्रान्तिका या चुनावका लागि ? यो संगठन कहाँनेर फिट हुन्छ ?
मैले अघि भनेको दार्शनिक सैद्धान्तिक र राजनीतिक पक्षको तुलनामा संगठन भनेको सहायक कुरा नै हो । संगठन अहिले जस्तो छ, त्यसलाई तपाईंले भद्रगोल भन्नुभयो, त्यही भद्रगोलभित्रै गोल गर्ने माओवादी आन्दोलनको विशेषता हो । तपाईंले यो कुरालाई ध्यान दिनु भएन भने जहिले पनि केही भद्रगोल बनाएर नै गोल हुने गरेको छ । ०४६ को आन्दोलनपछि सबै पार्टीलाई जुटाएर १२ महामन्त्रीलाई मैले एकठाउँमा केन्द्रित गरेको थिएँ । मान्छे अचम्म परेका थिए ।
१२ महामन्त्री एकैठाउँमा ल्याएर एउटा केटोले नेतृत्व गर्ने भएको छ भन्दा मान्छे दंग परेका थिए । भद्रगोल नै भएको थियो, त्यतिबेला पनि तर त्यही भद्रगोलबाटै गोल सुरु भएको हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । ०५२ मा जनयुद्धमा हाम्फाल्दा पनि मानिसले भद्रगोल नै ठानेका थिए । संगठनभित्र धेरैलाई ‘डिप्रेसन’ भएको थियो । तर, जनयुद्ध सुरु भएपछि संगठन आफैं ट्र्याकमा आयो, अहिले शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पनि भद्रगोल नै भएको हो । त्यसकारण माओवादी आन्दोलनको विशेषता नबुझ्नेले त जसरी हिसाब गरिदिए पनि भयो तर माओवादीको पृष्ठभूमि, उनीहरूको स्कुलिङ, सोच्ने र काम गर्ने तरिकालाई हेर्यो भने अहिलेको संगठन मेरा लागि दूधभात हो । मैले यसलाई सरल देखेको छु, मान्छे आत्तिएका छन् । कसैको रुवाबासी छ, कराएका छन् । तर, मलाई लाग्छ– यही हो निरन्तरतामा क्रमभंग । महाविपत्तिलाई बेहोर्दै अगाडि बढ्ने माक्र्सवादको विशेषता भनेको पनि यही हो । यो बिस्तारै महाधिवेशनसम्म पुग्दा आफैं ट्र्याकमा आउँछ आउँछ । आउनैपर्छ अर्को कुनै उपाय छैन ।
त्यसो हुन्छ भन्ने मेरो आधार के हो भने, दुई गलत विचारविरुद्ध मैले जहिले पनि नेतृत्व र संघर्ष गरें भन्ने छ मलाई । र, माओवादी आन्दोलन त्यसैको परिणाम हो । एकातिर बुर्जुवा सुधारवाद अर्कोतिर जडसूत्रवादी संशोधनवाद जे भने पनि दुईसँग मैले जहिल्यै पनि ‘कम्प्लिकेटेड’ ढंगले संघर्ष गर्दै पार्टी पनि बन्यो माओवादी आन्दोलन पनि भयो ।
हुटिट्याउँले आकाश मैले नै थामेको हो भन्छ भने त्यसको कुनै जवाफ छैन । इतिहासका तथ्यले बोलिरहेका छन् नि । बाबुरामलाई कसरी टिपेर ल्याएर हामीले पोलिट्व्युरोमा पुर्याइदिएको हो सबैलाई थाहा छ । सेक्टर काण्डपछि किरणको के हालत भएको थियो ।
पार्टीभित्रको संघर्ष हेर्नुभयो भने पनि यी दुई प्रवृत्तिसँग निरन्तर संघर्ष थियो । प्रतिनिधि पात्रका रूपमा किरण एकातिरबाट बाबुराम अर्कोतिरबाट जो थिए, हिजोबाट अन्तरसंघर्षमा थिए । कहिल्यै खाली बसेको होइन । उहाँहरूले जितेको भए माओवादी आन्दोलन हुँदैनथ्यो । माक्र्सवादले जित्यो अथवा हाम्रो प्रवृत्तिले जित्यो, त्यसकारण माओवादी युद्ध पनि भयो । शान्तिप्रक्रिया भयो । अहिले पार्टी एकता पनि भयो । तर, ती अन्तरसंघर्षमा लड्ने पात्र अहिले बाहिर गए ।
माक्र्सवादले जित्यो, हाम्रो प्रवृत्तिले जित्यो भन्नुहुन्छ तर किरण र बाबुरामले हामी नभएको भए जनयुद्ध नै हुन्नथ्यो भन्छन् त ।
हुटिट्याउँले आकाश मैले नै थामेको हो भन्छ भने त्यसको कुनै जवाफ छैन । इतिहासका तथ्यले बोलिरहेका छन् नि । बाबुरामलाई कसरी टिपेर ल्याएर हामीले पोलिट्व्युरोमा पुर्याइदिएको हो सबैलाई थाहा छ । सेक्टर काण्डपछि किरणको के हालत भएको थियो । हुटिट्याउँले भन्छ– त्यो कुरा पत्याउने मान्छेहरू पनि हुन्छन्, समाजमा त विभिन्न वर्ग छन्, विभिन्न प्रकृतिका मान्छे छन् । झुटै कुरा पनि पत्याउँछन् ।
पार्टीका सबै अंगले काम गर्दा मात्र नतिजा राम्रो आउने हो । अहिले तपाईं हिमालदेखि मधेस र पूर्वदेखि पश्चिम दौडिरहनुभएको छ । कार्यकर्तालाई काम दिनुको सट्टा आफैं किन दौडिरहनुभएको छ ?
त्यो बेकारको कुरा हो, अहिले हजारौं मान्छे दौडिइरहेका छन् । म एक्लै गएर जनतालाई घर–घरमा भेटेको छु र ? चाहे मर्चवार भन्नुस् चाहे नेपालगन्ज, जहाँ जाँदा पनि हजारौं छटपटी भएको छ, मान्छे दौडादौड गरेका छन् । मैले हेर्दा सबै दौडन सुरु गरेका छन् । बीचमा पार्टी एकताभन्दा अगाडिको अवस्था अलि कम्प्लिकेटेड देखिएको थियो । खासगरी भन्नुहुन्छ भने दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएपछि हामी पार्टीतिर ध्यान दिन थाल्यौं । हामीले पार्टी पुनर्निमार्णलाई ध्यान दिन थालेदेखि आजसम्म आउँदा म एक्लै दौडेको छु भन्ने मान्छेलाई परेको छ । कुरा त्यसो होइन, हजारौं कार्यकर्ता असन्तुष्ट भएर पनि सक्रिय भएका छन् । सन्तुष्ट भएर पनि सक्रिय भएका छन् । तर, निष्क्रिय बसेका छैनन् । सबै दौडिइरहेका छन्, कोही केन्द्रीय समितिमा परेनौं भनेर दौडिइरहेका छन्, कोही पर्यौं भनेर दौडिइरहेका छन् । कोही पोलिटव्युरो र सेक्रेटरियट भनेका छन्, दौडिइरहेको देख्छु मैले ।
एकता भएको महिना दिन हुन थालेको छ, तपार्इंको एजेन्डा थियो एक नम्बर बनाउने, अब त्यो बाटो सुरु भएको विश्वास छ ?
एक नम्बर बनाउने सवालमा हामीले अहिले देशको राजनीतिमा खासगरी भूकम्पपछि जसरी राजनीतिक पहल लिने कोसिस गर्यौं, संविधान घोषणा गराउने, सकार बनाउने, नाकाबन्दी सामना गर्ने आदि–इत्यादिबाट राजनीतिक ग्राउन्ड बनेको मेरा विश्लेषण छ ।
दोस्रो, अबचाहिँ पार्टी पुनःनिर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो प्रक्रिया सुरु पनि भयो । तेस्रो पार्टी एकता गर्नुपर्छ माओवादी विभाजित धारालाई फेरि एक ठाउँमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने थियो । एक नम्बर बनाउन जरुरी थियो ।
चौथो र मूल कुरा गाउँमा फर्कने । अहिले म कार्यक्रम बनाउँदै छु । सबैलाई गाविसको जिम्मा दिइन्छ अब । अध्यक्ष भए पनि केही गाविस मेरो जिम्मामा हुनुपर्यो । त्यहाँ काम गर्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउँछन् अन्यथा आउँदैनन् भन्ने बनाइसकेपछि यो ठूलो भनिएको संगठन सजिलै सानो हुन पुग्छ ।
नेपालमा माओवादी स्कुल भिन्न हो । यो ०४६ पछि बनेको स्कुल हो । यसको सोच्ने, काम गर्ने र राजनीतिको नेतृत्व गर्ने आफ्नो तरिका छ । यसको विशेषताको खोजी संश्लेषण अहिलेको आवश्यकता हो । जो अब बिस्तारै संश्लेषण हुनेतिर गयो । सबै चीज नयाँ छन् ।
तल फर्किएपछि उनीहरूले जनता र कार्यकर्ताको मन जित्नुपर्यो । त्यसपछि मात्रै उनीहरू (नेता) को हैसियत स्थापित हुन्छ अन्यथा हुँदैन । त्यसो हुनाले मलाई के लाग्छ भने यसरी जाँदा एक नम्बर पार्टी बनाउने राजनीतिक आधार त हाम्रो छँदै छ, उही जनतालाई बुझाउने कुरामात्र हो । जनताबीचमा गएर यति–यति कारणले हामी राजनीतिक रूपमा एक नम्बर छौं भन्ने हो । लिडरसिपका रूपमा पनि जनताले त्यो कुरा स्वीकार गरेको छ, विरोधीले पनि । लिडरसिपका रूपमा दुई नम्बर भन्ने स्थिति नै छैन । सिध्याउन त खोजे धेरैले अझै पनि सिध्याउन खोजिरहेका छन्, त्यो मैले बुझेको छु । अरूले पनि बुझेका छन् तर पनि हामी सिद्धिएका छैनौं । सिध्याउने षड्यन्त्र चानचुनेचाँहि छैन । तपाईंहरूले देखिराख्नु भएको छ । कुनै दिन आएपछि भनौंला । कति ठुल्ठूला षड्यन्त्र भइराखेका छन् भन्ने । तर, जति गरे पनि सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले हामी पहिलो नम्बरमै छौं । अब संगठनलाई पहिलो बनाउने आवश्यकता हो । संगठनलाई पहिलो बनाउन अब क्रमभंगको स्थितिबाट लैजाने कुरा हो, हामीले त्यसो गर्यौं । मलाई अनौठो पनि लागेको छ, उही लिडरको नेतृत्वमा जनयुद्ध, शान्तिप्रक्रिया, पार्टी विभाजन र एकता हुने कुरा मैले कतै देखेको छैन । अर्थ नभएका स–साना समूहको कुरा छाडिदिनुस्, देशको इतिहासलाई नै बदल्ने पार्टीको इतिहासमा यस्तो भएको छैन ।
हिजोआज प्रशिक्षणमा जाँदा सबै साथीले प्रशिक्षणमा भनेको कुराले मलाई अनुभूति हुन्छ क्या– ‘हामीले गल्ती गर्यौं, अब लिडरसिपलाई एकपटक हामी पूरै साथ दिन्छौं’ भनेर उहाँहरूले बोल्ने गर्नुभएको छ । यो मेरो विचारमा सामान्य कुरा होइन । हिजो विभाजन हुँदा गद्दार भयो, आत्मसमर्पण गर्यो । यसलाई मार्नुपर्छ भनेर पनि लागे केही । भएका शब्द सबै प्रयोग गरे । तर, इतिहासले त्यो कुरालाई पुष्टि गरेन । अब त मैले धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । पुष्टि के गर्यो भने, लिडरसिप जनताले बनाउने हो, जनताले बनाएको थियो । त्यसलाई कसैले मनोगत रूपमा सिध्याउन खोजेर सिद्धिदैन भनेर प्रमाणित भयो । यस्तै व्यक्तिको जीवनमा यस्तै अनुभूति कमै मान्छेले गर्न पाउँछन् । एकपटक गर्न खोज्ने त्यसपछि उठ्नै नसक्नेगरी सिद्धिएको मैले देख्छु । तपार्इंहरूजस्तो पत्रकार साथीहरूले यसलाई गहिरो अनुसन्धान गर्नुहोस्, नेपालमा यो चानचुने कुरा भइहरेको छैन । ठूलो प्रयोग भइरहेको छ ।
नेपालमा माओवादी स्कुल भिन्न हो । यो ०४६ पछि बनेको स्कुल हो । यसको सोच्ने, काम गर्ने र राजनीतिको नेतृत्व गर्ने आफ्नो तरिका छ । यसको विशेषताको खोजी संश्लेषण अहिलेको आवश्यकता हो । जो अब बिस्तारै संश्लेषण हुनेतिर गयो । सबै चीज नयाँ छन् । विभाजन हुँदा पनि अरूजस्तो गरी भएन । एकता हुँदा पनि अरूजस्तै गरी एकता हुँदै छैन । त्यसैले यो माओवादी स्कुल के चीज हो, अध्ययन गर्नैपर्छ । यसको अध्ययनमा अहिलेका बुद्धिजीवीको दिमाग गएन भने भोलिको पुस्ताले फेरि खोज्छ । बीसौं हजारको बलिदानले राजतन्त्र अन्त्य भएको इतिहासलाई दबाउन खोजेर कांग्रेस र एमालेले दब्छ भन्ने सोच्नु त्योभन्दा ठूलो गल्ती केही पनि हुँदैन ।
राष्ट्रिय सरकार बनाउने भनेर तपाईं आफैंले हामफाल्नुभयो । आजको दिनमा राष्ट्रिय सरकारको मुद्दा कहाँ छ ?
सरकारबारे छलफल चलिरहेको छ– सबैबीचमा । हामीले राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरा सत्ताको चासो भएर गर्यो भन्ने कुरा सुनिन्छ । योचाहिँँ गलत हो । अहिले देशका अगाडि जे–जस्ता समस्या छन्, त्यो राष्ट्रिय सहमतिविना हल हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । तर कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले त्यो कुरा बुझिराखेको छैन् । त्यसैले कहाँनेर गएर के विस्फोट हुन्छ भन्न सकिँदैन ।
हिजो पनि जनयुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आयो । आज पनि कांग्रेसले चाहे त्यो मधेसका जनताको कुरा होस्, चाहे पुनःनिर्माणको । चाहे विकास निर्माण गर्ने कुरा होस् । चाहे संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवस्था, चुनाव गर्ने आवश्यकता होस् वा ऐन कानुन बनाउने विषयलाई मैले कहिल्यै कांग्रेस र एमालेले प्राथमिकतासाथ लिएको देखेको छैन । देश भड्खालोमा जाओस् भन्ने सोचाइ छ नेताहरूको । देशलाई फेरि कहीं न कहीं लगेर भड्खालोमा हाल्नेभन्दा बाहिर गएको अवस्था देखिँदैन । अहिले पनि एमाले र कांग्रेसका नेतासँग मेरो कुरा भइरहन्छ । कांग्रेस अहिले देशको पहिलो नम्बरको पार्टी र एमाले दोस्रो नम्बरको पार्टी छ । यसलाई तत्काल अहिले बदल्न त सकिन्न फेरि पनि । उनीहरूसँग अरू शक्ति पनि सहमत भएमात्रै संविधान संशोधन हुन सक्छ । त्यसैले यो देशको समाधान राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो । संविधान बडो दुःखले बनाएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीलाई संविधान बनाउन हतारो थिएन । ओलीजीलाई पनि समानुपातिक समावेशी व्यवस्थासहितको संघीय संविधान बनाउन हतारो थिएन । हामीले तेस्रो पार्टी भए पनि संविधान बनाउने परिस्थिति सिर्जना गर्न धेरै मेहिनेत गर्यौं ।
मैले राष्ट्रिय सहमतिकै लागि प्रयास गरिरहेको छु । सबैतिर कुरा भइरहेको छ, निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । अझै पनि सम्भावना छ राष्ट्रिय सहमतिको । अब भएन भने हामी मुद्दामा जान्छौं ।
अहिले कार्यान्वयनमा पहिलाकै स्थिति छ । जसलाई हिजो संविधान बनाउन त्यति धेरै रुचि थिएन । आज उनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पनि त्यति धेरै रुचि छैन । संविधान कार्यान्वयन नभए के हुन्छ त संविधान कार्यान्वयन नभएर । उनीहरूलाई त हिन्दु राष्ट्र भए पनि फरक छैन । राजै फर्किएर आए पनि के भयो । तर, हामी माओवादीका लागि त जीवनमरणको सवाल छ । हामी माओवादीमात्रै होइन, मधेसी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, उत्पीडित वर्गलाई जसको सहयोग लिएर हामीले राजतन्त्र अन्त्य गर्यौं, त्यो समुदायलाई गाह्रो हुन्छ ।
त्यस्तो विचार राख्ने पात्रसँग सहकार्य गर्दा कता–कता गइयोजस्तो लाग्दैन ?
जानैपर्ने थियो । अर्को उपाय नभएपछि त जानुपर्यो नि ।
तपाईले संवादको प्रयोग गर्नुभयो, राष्ट्रिय सहमतिका लागि । संवादको प्रयोग सफल भएन भने त अर्को प्रयोगमा जाने होला नि ?
मैले राष्ट्रिय सहमतिकै लागि प्रयास गरिरहेको छु । सबैतिर कुरा भइरहेको छ, निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । अझै पनि सम्भावना छ राष्ट्रिय सहमतिको । अब भएन भने हामी मुद्दामा जान्छौं । शान्तिप्रक्रियादेखिका मुद्दा, संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुद्दा, जनताका विकास निर्माणदेखि पुनःनिर्माणसम्मका मुद्दा लिएर जान्छौं । ती मुद्दामा जोसँग बढी सहकार्य गर्दा फाइदा हुन्छ, हामी त्यहीसँग सहकार्य गर्छौं । मुद्दामा आधारित भएर सहकार्य हुन्छ ।
कहिलेसम्म पर्खनुहुन्छ त ?
धेरै लाग्दैन । असार सुरु भयो । यो महिनाभित्रमा केही न केही किनारा लाग्छ ।
तपाईंलाई जनताले भोट दिने भनेको, यी नेताहरूले हाम्रो पक्षमा काम गरिदेलान्, देशका लागि राम्रो काम गर्लान् भनेर हो । आज तपाईंले जो–जो मान्छे सिंहदरबार पठाउनुभयो, न जनता न कार्यकर्ता र तपाईं आफैं पनि खुसी हुनुहुन्नहोला । के सोच्नुभएको छ, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन विषयमा ?
त्यसै भएको हुनाले मैले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पैदा भयो भनेको हुँ । यसको जवाफ मैले योभन्दा बढी अहिले दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
अहिले देशको राजनीतिक स्थिति नै जटिल भएकाले मन्त्रीहरू वा उनीहरूको कामलाई मात्रै हेरेर हुने स्थिति छैन । अब केही मन्त्रालयमा राम्रा काम नभएका पनि होइनन् । केही मन्त्रालयमा राम्रा काम सुरु भएका छन् ।
तपाईंको दिमागमा एउटा कुरा खेल्ने, तपाईं एउटा कुरा गर्ने सरकारमा गएका प्रतिनिधि पात्रले अर्कै काम गर्दा तालमेल नमिलेकोजस्तो देखियो भनेर टिप्पणी हुन्छ । यो नेताहरूले पार्टी नीति नबुझेको हो या के हो ? तपाईं राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईंका मन्त्रीले एउटा क्लबमा गएर अर्कै कुरा गर्छन्, यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?
सम्बन्धित विषयमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ । कहिलेकाहीं ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ र कहिलेकाहीं निर्णयलाई बुझ्ने विषयले पनि यस्तो भइरहेको हो । तर, सधैं यस्तो हँुदैन । यो विषय ट्र्याकमा जान्छ ।
मन्त्रीहरूलाई नम्बर दिने भन्नुभएको थियो, सरकारमा जादाँ । अहिलेसम्म आठजना मन्त्रीले कति–कति नम्बर पाए, पास कि फेल भए ?
अहिले देशको राजनीतिक स्थिति नै जटिल भएकाले मन्त्रीहरू वा उनीहरूको कामलाई मात्रै हेरेर हुने स्थिति छैन । अब केही मन्त्रालयमा राम्रा काम नभएका पनि होइनन् । केही मन्त्रालयमा राम्रा काम सुरु भएका छन् । यसले भोलिका दिनमा जनताको दैनिकीमा सकारात्मक असर पार्नेछ । चाहे तपाईं ऊर्जासँग सम्बन्धित कुरा गर्नुस्, कृषि, शिक्षा वा सामान्य प्रशासनसम्बन्धी कुरा गर्नुस् । यी सबै मन्त्रालयका काम हेर्नुभयो भने केही न केही महत्वपूर्ण कुरा भएका छैनन् भन्ने होइन ।
हामी सरकारमा भएकै बेला लोकप्रिय बजेट आयो । हुन त मान्छेलाई सजिलै एमालेले ल्यायो भन्ने हुँदोरहेछ । तर, तपाईं मन्त्रालयपिच्छे हेर्नुभयो भने हाम्रो पार्टीका मन्त्री र हाम्रा मन्त्रालयको भूमिका त्यहाँ धेरै गहिरो छ । बजेटको स्वामित्व लिनुभन्दा हाम्रा कतिपय साथीचाहिँ अलि सोझा हुन्छन्, राजनीतिमा स्वामित्व लिन नजान्ने । आफैंले गरेको कुरा आफैंले हो भन्न नसक्ने । आफूले धेरै मिहिनेत गरेर फल फलाको छ, अलिकति कसैले केही गर्यो भने छाडिदिनेजस्तो । चाहे कृषि क्षेत्र, चाहे शिक्षा वा विकास अन्य क्षेत्र वा स्थानीय जनतामा बजेटको कुरा पुर्याउने विषय भन्नुस्, यसमा हाम्रो पार्टीको एमालेको भन्दा बढी भूमिका छ किनकि प्रमुख मन्त्रालय हाम्रो हातमा छ अनि के ती प्रमुख मन्त्रालयलाई माइनस गरेर बजेट राम्रो बनेको हो त ? ती मन्त्रालयको योजनामा त त्यहाँ गएका छन् । तर, हाम्रा मन्त्रीको कमजोरी के भएको छ भने आफैंले गरेको राम्रा कामको पनि स्वामित्व लिन नसक्ने । यो कमजोरीचाहिँ भएको छ । तर, काम केही पनि गरेको छैन भनेर फिटिक्कै भएन भन्न मिल्दैन ।
डा. बाबुराम भट्टराईको राजनीतिमाथि जान्न खोजेको, उपस्थित जे थियो र ओलीले एमालेलाई बाहेक अरूलाई धक्का दिन्छ भनेर जे टिप्पणी गरे । तपाईंको प्रारम्भिक टिप्पणी के हो, नयाँ शक्तिको औपचारिक घोषणापछिको ?
पहिलो कुरा उहाँ जसरी जानुभएको छ, उहाँले एउटा कुरा स्पष्टै के भन्नुभएको छ भने क्रान्ति, माक्र्सवाद र हिजोको जनयुद्धबाट आफूलाई अलग्याउने ढंगबाट उहाँ जानुभएको छ । उहाँले जुन वर्ग समुदायलाई लिएर समृद्धिको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो भनेको कांग्रेस र एमालेको समानान्तर ढंगले पार्टी बनाउने प्रयास हो । तपाईं वैचारिक भन्नुस् वा मान्छे पात्र हेर्नुहुन्छ भने पनि के देख्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी धक्का एमालेलाई पुग्छ । उहाँले दिने धक्का कांग्रेसलाई हो, एमालेलाई हो । माओवादीलाई हुन्छ कि भनेर मानिसलाई परेको छ , बिल्कुल गलत हो ।
कोही पनि गम्भीर राजनीतिज्ञले विचार गर्यो भने उहाँ त वर्ग समन्वयतिर जानुभयो । त्यस्ता प्रशासक, त्यस्ता मान्छे जो यो समाजमा हाइफाइमा छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ढंगले र उहाँले जुन अर्थनीतिको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो पनि त्यही ‘अपर मिडिल क्लास’लाई सम्बोधन गर्ने ढंगले जानुभएको छ । त्यसकारण उहाँको विचारले पनि र संगठनात्मक आचरणले पनि र उहाँले जो विधि विज्ञापनवाला विधि अपनाउनुभएको छ, आजका साम्राज्यवादी पुँजीवादी विज्ञापनमा केन्द्रित छन् । विचार पनि बुर्जुवा लिनुभयो, मान्छे पनि बुर्जुवा नै खोज्दै हिँड्नुभयो, विज्ञापन विधि पनि बुर्जुवा नै अपनाउनुभयो भने त्यसले माओवादी विचार र आन्दोलनमा कुनै क्षति पुर्याउँदैन । क्षति पुर्याउँछ भने एमाले र कांग्रेसलाई । समानान्तर पार्टी उहाँले त्यो लाइनका लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ । चुनाव जित्ने आधार उहाँले त्यता बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि ओलीजीले त्यहाँ जे टिप्पणी गर्नुभयो, मलाई लाग्छ– ओलीजी आतंकित भएर गरेको टिप्पणी हो त्यो ।
भनेपछि कांग्रेस, एमालेको विकल्पका रूपमा बाबुरामले पार्टी बनाउनुभएको हो ?
हो नै त्यो । स्पष्टै छ, उहाँले वर्ग समन्वयको विचार, उहाँको विधि, उहाँले संकलन गरेका मान्छे, उहाँको भीड जम्मा गर्ने तरिका, तपाईं जताबाट हेर्नुस्, त्यसले हान्ने भनेको एमाले र कांग्रेसलाई नै हो ।
उत्पादनका लागि संघर्ष वा समृद्धिका लागि संघर्ष माओवादी आन्दोलनले सुरु गरेको एउटा नारा हो । यसमा बाबुरामजीले चिटिङ गर्नुभयो । उहाँले माक्र्सवाद लेनिनवाद, माओवादअन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भनिएको हो । तर, यी सबै वाद परित्याग गरेर, कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै परित्याग गरेर त होइन ।
तपाईंले नेपाललाई विकास गरेर स्वीटजरल्यान्ड बनाउने भन्नुहुन्थ्यो । त्यो ‘प्याटेन्ट राइटस्’ त बाबुरामले लगेजस्तो लाग्छ कि ?
मैले स्वीटजरल्यान्ड बनाउने भनेको सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा, मजदुर किसानको एकताका आधारमा भनेको हो । अहिले यो फेरि विकासको कुरा वा उत्पादनका लागि संघर्षको कुराचाहिँ बाबुरामजीको होइन । ‘रियालिटी’ माओवादीभित्रबाट हेर्नुहुन्छ भने हेटौंडा महाधिवेशनमा जे एजेन्डा पारित भयो । त्यो बाबुरामजीको मस्तिष्कको उपज होइन । त्यो पार्टीको हो, नेतृत्वको हैसियतले मैले त्यसलाई प्रस्ताव गरेपछि त्यो संघर्षतिर जानुपर्छ भनिएको हो । तर, अहिले साम्राज्यवादी विज्ञापनवालाले त्यो बाबुरामजीकै हो भन्छन् भने मेरो भन्नु केही छैन । तर, गम्भीर विश्लेषकले के कुरा देख्छ भने यो उत्पादनका लागि संघर्ष वा समृद्धिका लागि संघर्ष माओवादी आन्दोलनले सुरु गरेको एउटा नारा हो । यसमा बाबुरामजीले चिटिङ गर्नुभयो । उहाँले माक्र्सवाद लेनिनवाद, माओवादअन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भनिएको हो । तर, यी सबै वाद परित्याग गरेर, कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै परित्याग गरेर त होइन । उहाँको अर्को कुरा के भने अर्को वर्ग जसविरुद्ध हाम्रो लाइन लक्षित हो, त्यही वर्गसँग मिलेर उहाँ त्यो कुरा भनिराख्नुभएको छ । त्यसकारण सारमा फरक भयो । उहाँले चिट गर्नुभयो ।
बाबुरामले एउटा प्रस्ताव गर्नुभएको छ । वामलोकतान्त्रिक पार्टी । विचारमा कम्युनिस्ट विधिमा लोकतान्त्रिक भन्ने छ । यो तर्कलाई के भन्नुहुन्छ ?
यो ‘टर्मिनोलोजी’ नयाँ होइन । यो विश्वभरि धेरै पहिलेदेखि माक्र्सकै पालादेखि ल्याउन खोजिएको ‘टर्मिनोलोजी’ हो । त्यो अरूले होइन, बुर्जुवा वर्गकै प्रतिनिधिले अघिसारेको वामपन्थीको लोकप्रियताका कारण वामपन्थीलाई कमजोर पार्न अघि सारिएको हो । पहिलो कुरा यो नयाँ छैन । दोस्रो कुरा, नेपालमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर धेरैले भनिसकेको र त्यो फेल भइसकेको हो, नेपालकै कुरा गर्नुपर्दा ।
तेस्रो कुरा, यो हो केभन्दा बाघ र बाख्रालाई सँगै राख्ने कुरा हो । बाघ र बाख्रालाई सँगै राखेर म प्रगति गर्छु भन्यो भने त्योभन्दा हास्यास्पद अरू केही हुन्छ र ? वामपन्थी कम्युनिस्टको काम गर्ने एउटा धार छ, उनीहरूको एउटा विचार छ, संघर्षको एउटा तरिका छ । वर्ग आधार छ । तथाकथित लोकतान्त्रिक भनेर प्रयोग गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक भनेको दक्षिणपन्थ भनेको हो, उहाँले दक्षिणपन्थ र वामपन्थलाई एकठाउँमा राख्ने भनेको असम्भव हो । त्यसैले उहाँ असम्भव प्रयास गरेर सफल हुनुहुन्न । उहाँले वामचाहिँ कम्युनिस्टलाई भ्रममा राख्न प्रयोग गर्नुभएको हो तर सारचाहिँ उहाँको कांग्रेस नै हो । हुन खोजेको उहाँ दोस्रो कांग्रेस हो ।
सँगै लड्न पनि जानुभयो, सँगै युद्ध पनि गर्नुभयो, कहीँ सहकार्य हुन सक्छ तपाईंहरूको ?
युद्धमा जानुभयो । उहाँले हिजो मद्दत गर्नुभयो । यो सकारात्मक पाटो हो । यसको म नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्न । तर, अन्तरसंघर्षमा उहाँसँग सुरुदेखि नै वैचारिक संघर्ष भइराख्यो । उहाँले अर्कै विचारको प्रतिनिधित्व गरेको देखिने र मैले अर्कै विचारको प्रतिनिधित्व गरेको देखिने । जाँदाजाँदै उहाँले भन्नुभयो रे– मैले यति धेरै मिहिनेत गरें प्रचण्डलाई बदल्न सकिनँ । मैले पनि भन्ने के हो भने बाबुरामलाई बदल्न यति धेरै प्रयास गरें तर सकिनँ । २५ वर्षभन्दा बढी अझ ०३८÷३९ सालदेखिको हो– हाम्रो संगत । मैले बाबुरामजीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन, सर्वहारा जनताको पक्षमा, क्रान्तिको पक्षमा ल्याउन धेरै मिहिनेत गरेँ । ‘लास्ट’मा उहाँ जानुभयो, सकिएन । उहाँले पनि मलाई बदल्न धेरै मिहिनेत गर्नुभएको होला । सकिन्छ कि हामीजस्तो बनाउन भनेर उहाँले सोच्नुभएको होला, त्यसैले रिसाउनुभयो होला ।
तपाईंले एउटा कार्यक्रममा उदार तानाशाहको प्रसंग निकाल्नुभयो ? बहसमा आयो, अहिले यस्तो बहस सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता के ?
अहिले बहसमा त्यस्तो पनि चलेको छ भनेको हो मैले । सिंगापुर र मलेसियाको उदाहरण दिँदै त्यहाँको विकासमा चाहिँ उदार तानाशाहको, तानाशाह नै हो तर पनि जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा काम गर्नेखालको । यहाँ नेपालमा पनि त्यस्तै चाहिने हो कि प्रजातन्त्रले जहिले पनि अराजकता विकास निर्माणतिर केन्द्रित नै नहुने भन्ने बहस पनि छ भनेको थिएँ मैले । मैले के पनि वाक्य भनेको थिएँ भने नेपालमा त्यस्तो उदार तानाशाह आउन सम्भव छैन । त्यो आयो भने निरंकुश तानाशाह नै हुन्छ भनेको थिएँ । त्यसकारण कसैले त्यस्तो उदार तानाशाह चाहिन्छ भनेर मलाई सुझाव दिन्छन्, त्यो भनेको देशलाई निरंकुशतातर्फ लैजाने षड्यन्त्र हो भनेर मैले भन्ने खोजेको हो । मैले उदार तानाशाह चाहियो भनेको होइन । बरु उदार तानाशाहको नारा लिएर निरंकुश तत्व आउने खतरा छ भनेको हो ।
अर्को एउटा कुरा नेपालको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण बन्ने र भत्किने भइहाल्यो । तपाईंचाहिँ कहिले उत्तरतर्फ देखिने, कहिले दक्षिणतर्फ देखिने, कहिले बीचमा देखिने । ठ्याक्कै तपाईंको समीकरणचाहिँ के हो ?
(हाँस्दै) तपाईंले जे प्रश्न गर्नुभयो त्यही हो मेरो समीकरण । कहिले उत्तरतर्फ देखिने, कहिले दक्षिणतर्फ देखिने, कहिले बीचतर्फ तर हुनेचाहिँ नेपालमा हो– मेरो समीकरण । त्यति हो । प्रचण्ड भनेकै त्यही हो । नत्र त प्रचण्डै हुँदैन नि । दक्षिणतिरमात्रै देखिए पनि प्रचण्ड हुँदैन । उत्तरतिरमात्रै देखिए पनि प्रचण्ड हुँदैन । सबैतिर सन्तुलन गरेर नेपालतिर जाने नै प्रचण्ड हो ।
सबै दृष्टिकोणले पार्टीहरूले एउटा सहमति गर्ने हो भने एकैचोटि चुनाव गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुभएको थियो । मलाई त्योचाहिँ मननयोग्य छ, विचारणीय छ भनेर भनें । मैले उहाँको नाम नै कोट गरेर भनेको थिएँ– त्यो छलफल सबैसँग चलेको छ अहिले ।
बुद्धनगरबाट बादललाई पेरिसडाँडा लगेपछि मोहन वैद्यसँग तपाईंको संवाद भएको छ कि छैन ?
फोनमा कुरा भा’को छ । कुराकानी त अहिले राजनीतिक कुरा भएको छैन । जे भयो भइहाल्यो । अब छलफल गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ उहाँसँग । अर्को पार्टी कार्यालय कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो । हामी त्यो मिलाउँदै छांै ।
स्थानीय निकाय चुनाव र संसदीय चुनाव एकैपटक गर्ने भन्नुभयो । यो प्रयोगले कि त एकैपटक विजय वा एकैपटक पराजित हुने खतरा रहन्छ । यस्तो प्रयोगले जटिल प्रयोगमा किन तपाईंको मन गयो ?
मैले पार्टी, मेरो हित वा चुनावको हारजितको विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गरेको होइन । मेरो कुरा के हो भने जम्मा २० महिना बाँकी छ । अब स्थानीय चुनाव, फेरि–फेरि संघीय चुनाव, फेरि संसदीय चुनाव गर्यो भन्दा समयको पनि दबाब बढी हुन्छ । अब ऐन कानुन बनाउने दबाब पनि हुन्छ । खर्च पनि बढी हुन्छ । त्योभन्दा मैले पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलको एउटा लेख पढेको थिएँ । उहाँले सबै दृष्टिकोणले पार्टीहरूले एउटा सहमति गर्ने हो भने एकैचोटि चुनाव गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुभएको थियो । मलाई त्योचाहिँ मननयोग्य छ, विचारणीय छ भनेर भनें । मैले उहाँको नाम नै कोट गरेर भनेको थिएँ– त्यो छलफल सबैसँग चलेको छ अहिले । यदि तीनवटै चुनाव एकैचोटि सम्भव भएन भने पनि दुईपटकमा गर्न सम्भव छ । स्थानीय र प्रदेशको एकैचोटि गर्ने । या प्रदेश र केन्द्रको एकैचोटि गर्ने हो भने कार्यतालिका मिलाउन सकिन्छ । खर्चका हिसाबले अनावश्यक बोझ हुँदैन ।
यसरी एकैचोटि गर्दा पार्टीलाई ‘रिस्क’ पनि छ । परिणामचाहिँ फाइदा पनि हुन सक्छ र घाटा पनि ।
आउने चुनावमा माओवादीले उत्पीडितवर्ग समुदायका पार्टीसँग गठबन्धन बनाउने कि एक्लै चुनाव लड्ने तपाईंको प्राथमिकता के ?
अहिले के कुरा छ भने हिजो जुन–जुन समुदायसँग हामीले एकाकार भएर गयौँ, आन्दोलन गर्यौं, त्यता फर्कनुपर्छ भन्ने छ । समुदायको हिसाबले पनि मधेसी, दलित, जनजाति, मुसलमान, गरिब मजदुर किसान, खस, आर्यका पनि मजदुर किसानसँग जोडिने विधि खोजी गर्ने भन्ने छ । अझै ठोस रूपमा भन्नुहुन्छ भने मधेस असन्तुष्ट छ अझै पनि । मधेसी मोर्चाको नामबाट विभिन्न विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन् । संघीय गठबन्धन भनेर अहिले रिले अनशन चलिरहेको पनि छ । हाम्रो विचार के छ भने यो समस्या छिटो समाधान गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने प्रक्रियासँग यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया पनि जोडिन्छ ।
हामीले मधेस, जनजाति या गरिब, किसानका समस्यासँग जोडिनेक्रममा विगतमा हाम्रो जुन कडी जनतासँग टुटेको छ । त्यो कडी फेरि जोन्डिन्छ भन्ने लाग्छ ।
मधेसकै समस्या समाधान गर्न हामी अरूभन्दा लचिलो छौं । हामी मधेसी जनताका वास्तविक मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा छांै । म एउटा रोडम्याप बनाएर त्यसलाई छिट्टै बाहिर ल्याउने कोसिसमा छु । उनीहरूसँग वार्ता गरेर त्यो रोडम्याप बाहिर ल्याउनेछु ।
मुद्दाका आधारमा तत्काल एमालेसँग कार्यगत एकताको सम्भावना देखेको छैन । या त एमालेसँग पार्टीगत, वैचारिक रूपमा सबै छलफल गरेर पार्टी नै एउटै बनाउने कम्युनिस्ट केन्द्र भन्ने हुन्छ, अहिले त्यो सम्भव छैन ।
हिजो एक चरण हामी शान्तिप्रक्रियामा आउने बेलामा मधेस माओवादीमय भएको थियो । अहिले मधेसको समस्या समाधान गर्ने विषयमा अरूको भन्दा हाम्रो भूमिका भिन्न छ । एमाले र कांग्रेसको भन्दा भिन्न छ । मधेसी मुद्दासँग नजिक छौं हामी । त्यस्तै थारू, आदिवासी जनजातिको पनि समस्या समाधान गरेर देशलाई एउटा प्रक्रियामा लैजाने कोसिसमा छु । हामी फर्कन खोजिरहेका छौँ । आफ्नै वर्ग र ठाउँमा ।
एमालेसँगको कार्यगत एकताको सम्भावना कत्तिको छ ?
एमालेसँग मुद्दाका आधारमै हुन सक्ने हो । मुद्दाका आधारमा तत्काल एमालेसँग कार्यगत एकताको सम्भावना देखेको छैन । या त एमालेसँग पार्टीगत, वैचारिक रूपमा सबै छलफल गरेर पार्टी नै एउटै बनाउने कम्युनिस्ट केन्द्र भन्ने हुन्छ, अहिले त्यो सम्भव छैन । वैचारिक रूपमा पनि सम्भव छैन । भावना, सांस्कृतिक कुनै पनि रूपमा त्यो सम्भव छैन । सरकारमा त हाम्रो कार्यगत एकता सम्भव भयो । तर, चुनावमा म सम्भव हुने देख्दिनँ किनकि हाम्रो आधार एउटै छ । ‘भोटर’ एउटै भएका कारण चुनावमा त्यो सम्भव हुने सम्भावना देख्दिनँ । असम्भव भन्ने शब्द त प्रयोग नगरौं । तर, सम्भावना कम देख्छु ।
एमालेको दोस्रो पुस्ताका केही नेताले अब एमालेमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अभाव रह्यो । तपाईं हाम्रै पार्टीमा मिसिन आउनुपर्यो र तपाईंले नेतृत्व लिनुपर्यो भन्नुभएको छ रे नि ?
त्यो भावनालाई म कदर गर्न चाहन्छु । तर, त्यो भावनामा मात्रै सीमित छ । विचार, यर्थाथमा अहिले प्रयोग भइहाल्ने स्थिति छैन ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा सरकार वा कानुन मन्त्रालयले के प्रगति गरेको छ ?
खासगरी यो नौबँुदे सहमति भइसकेपछि शान्ति प्रक्रियालाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर हामीले नौबुँदे सहमति गर्यौं । नौबँुदे गरिसकेपछि केही प्रगति पक्कै पनि भएको छ । अहिले ऐन संशोधन गर्ने एउटा, सत्यनिरुपणसम्बन्धी जुन ऐन छ, त्यसमा सत्यनिरुपण आयोगले पनि संशोधनको केही माग गरेको छ । हामीले पनि छलफल गरिरहेका छौँ र त्यो ऐन संशोधन गरेर जहाँनेर अप्ठ्यारो परेको छ, ती अदालत, प्रहरी, सिडियो कार्यालय वा मानवअधिकार आयोगमा भएका मुद्दा सबैलाई केन्द्रित गरेर सत्य स्थापित गर्ने, मेलमिलाप पनि गर्ने र त्यस्ताचाहिँ गम्भीर अपराधका मुद्दाबारे प्रतिनिधिमुलक कारबाही पनि गर्ने मान्यता भित्रपट्टिबाट ऐन संशोधन भइरहेको छ ।
टीआरसीको बारेमा भन्नुपर्दा ज्ञानेन्द्रको विषयमा पनि उजूरी परेको छ । कमल थापाको विरुद्धमा पनि उजूरी परेको छ । तपाईंको विषयमा पनि उजुरी परेको छ । अरूको विषयमा उजुरी पर्दा तपाईंहरू खुसी हुने र तपाईंको विषयमा उजुरी पर्दाचाहिँ दुःखी हुने । यो टीआरसीको विषयमा तपाईंलाई मान्य हुन्छ कि हुँदैन, यो कसरी निर्णय हुन्छ ?
यो प्रश्नमा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामीले शान्तिप्रक्रिया गर्दा यी सबै घटनामा चाहे राज्यबाट हुन् वा हाम्रो पार्टीबाट सबैलाई एउटा सिद्धान्तद्वारा हल गर्ने भनिएको हो । त्यो सिद्धान्त के हो भने संक्रमणकालीन न्याय सिद्धान्त भनेर अर्कै न्याय प्रणाली हो । परम्परागत फौजदारी अभियोग र सामान्य ‘क्रिमिनल ल’ अन्तर्गत होइन । यो एउटा संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीअन्तर्गत समस्या हल गरिनेछ भन्ने शान्ति सम्झौताको मूल भावना हो । यहाँ के ‘कन्फ्युजन क्रियट’ गरिएको छ भने यसरी जनयुद्धक्रममा भएका घटनालाई ‘क्रिमिनल ल’ अन्तर्गत अदालतले नै हेर्ने भन्नेतिर जोड गरेको देखिन्छ । जुन कुरा शान्ति सम्झौताको बिल्कुल विपरीत छ । मान्यतै विपरीत, सिद्धान्त विपरीत छ । अर्कोचाहिँ सोचाई के पनि थियो र छ भने जे–जे भयो–भयो, अब त्यसलाई कोट्याएर फाइदा छैन भन्ने पनि एउटा सिद्धान्त छ । हामीले यी दुइटै सिद्धान्तविपरीत संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबाट टुंग्याउने र सत्य स्थापित गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्तिद्वारा, परिपूरणद्वारा वा एक–अर्कालाई पश्चातापमार्फत मेलमिलाप गर्न लगाउने भन्ने मूल मर्म हो । यो सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित भएको दोस्रो विश्वयुद्धपछि, प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि यस्ता राजनीतिक कारणले भएका द्वन्द्वका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्नका लागि छुट्टै न्यायप्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ भन्ने सोचका आधारमा यो सिद्धान्त विकसित भएको हो । यो विभिन्न देशका विभिन्न ढंगले विकसित भए । दक्षिण अफ्रिकामा पनि यसको प्रयोग भएको थियो । नेपालमा पनि त्यही प्रणालीअन्तर्गत भएको हो । मुख्य कुरा सत्य पत्ता लगाउने र मेलमिलाप गराउने त्यसको ‘टे«न्ड’ हो । तर, केही गम्भीर प्रकृतिका घटनामा प्रतिनिधिमुलक कारबाही हुनैपर्छ । ताकि भविष्यमा यस्ता गल्ती नदोहोरिऊन् । अहिले ऐन संशोधनमा यही सिद्धान्तलाई टेकेर जानुपर्छ भनिएको छ । सत्यनिरुपण आयोगमार्फत नै जानुपर्छ सामान्य अदालतमार्फत होइन ।